DEG DEG + UPDATE: Shirka Golaha Ammaanka oo lagu soo hadalqaaday Doorashada Jubbaland +(Maxaa cusub oo aadan ogeyn)! | HalQaran.com
DEG DEG + UPDATE: Shirka Golaha Ammaanka oo lagu soo hadalqaaday Doorashada Jubbaland +(Maxaa cusub oo aadan ogeyn)!
Muqdisho (Halqaran.com) – Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa gelinkii dambe ee maanta shir ka yeeshay xaaladda Somaliya, iyadoo shirkan lagu soo hadalqaaday doorashada maalinta berrito lagu wado inay ka qabsoomto Magaalada Kismaayo.
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somaliya, James Swan oo shirkan khudbad ka jeediyay ayaa sheegay inay weli ka walaacsan yihiin Doorashada Madaxweyne ee Khamiista ka dhaceysa Magaalada Kismaayo.
Wakiilka Qaramada Midoobay ayaa sheegay inkastoo uu waqtiga gaaban yahay, hadana loo baahan yahay in Jubbaland ay ka qabsoomto hannaan keliya oo doorasho ah, oo dadka oo dhami ay ka wada qayb qaataan.
James Swan ayaa waxaa uu ka digay in qalalaase uu ka dhaco Jubbaland, marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada, waxaana uu ku baaqay in dhinacyada isu haya Doorashada Jubbaland looga baahan yahay inay ka fogaadan gacan ka hadal.
James Swan, Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somaliya ayaa sidoo kale ku baaqay inay isu tanaasul muujiyan siyaasiyiinta isu diidan hannaanka geedi-socodka Doorashada Jubbaland.
Xiriiriyaha Arrimaha Siyaasadda ee Britain, Stephen Hickey ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in Doorashada Jubbaland ay ku qabsoomto si amni iyo daah furnaanba leh.
”Ugu horayn Doorashada Jubbaland ee dhacaysa berri wa amuhiim inay ku dhacdo amni, nabadgelyo iyo daah furnaan. Waxaa taasi xigta doorashada 2020-ka, waxaana loo baahan yahay bartilmaameedyo ay tahay inay dowladdu hanato ka hor doorashada. Waxaa kale oo aan diiradda saaraynaa amniga xilliga kala-guurka ah, si Ciidamada Soomaalida ay masuuliyadda amniga ugala wareegaan Ciidamada Amisom ee haatan ku sugan wadanka.” Ayuu yiri Stephen Hickey oo Warbaahinta la hadlay, markii la soo geba-gabeeyay shirka Golaha Ammaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ayaa waxaa Khamiista berrito lagu wadaa in ay doortaan Madaxweyne, iyadoo ay doorashadan ku tartamayan illaa afar musharax, oo Axmed Madoobe uu ka mid yahay.
Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay dhankoodu sheegeen inay Khamiista dooran doonaan Madaxweyne, waxaana laga cabsi qabaa in arrintaasi ay gacan ka hadal sababto.
Shirka golaha ammaanka